Kulan mudo sadex bari ah ka socday Garoowe oo laga soo saaray bayaan ku saabsan dhawrista madaxbanaanida warbaahinta. – Radio Daljir
Oktoobar 3, 2012 1:07 b 0
Garoowe, Oct 03- Magaalada Garowe ee Caasimada Puntland waxaa shalay galab ku soo gabagaboobay Kulan mudo sadex maalmood ah ka soconayay kaasoo looga doodayay laguna falan-qaynayay madexbanaanida fikirka iyo Warbaahinta.
Kulankan oo qabanqaabadiisa ay iska kaashadeeen ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP, Wasaarada Warfaafinta, Isgaarsiinta, Hidaha iyo dhaqanka Dawlada Puntland iyo xafiiska siyaasadda ee QM UNPOS (United Nations Political Office and Security) ayaa waxaa lagu marti qaaday Warbaahinta, Dawlada, Bulshada Rayidka ah, Hay?adaha caalamiga ah iyo Kuwa Maxaliga ah.
Gabagabadii kulankan ayaa ka qaybgalayaashu waxay ka soo saareen baaq ay si wada jir ah qalin ugu diideen Wasaarada Warfaafinta, Isgaarsiinta, Hidaha iyo dhaqanka Dawlada Puntland iyo Ururka Saxafiyiinta Puntland ee MAP.
Kulankan intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay Waxyaabaha ay ka qorayaan Xoriyatul-qawlka iyo Madexbanaanida Dastuurka Puntland iyo kan Soomaaliya iyo sidoo kale Qawaaniinta Caalamiga ah iyo waxyaabaha ay arrintan ka qorayaan. Ujeedada ugu weyn ee kulankani lagaa lahaa ayaa ahayd sidii loo xoojin lahaa Madexbanaanida Fikirka, Xuquuqda Warbaahinta iyo dardargalinta xuquuqul insaanka wuxuuna kulankani gogol xaar u ahaa kulamo kale oo dib u eegis loogu samayn doono Shuruucda, Xeerarka iyo Siyaasadaha Warbaahinta Puntland.
Muddadii uu socday kulankan waxaa khuadbado iyo Casho badan ka bixiyay Khuburo badan oo isugu jirta Saxafiyiin, Cilmibaarayaal iyo Xirfadlayaal dhanka Xuquuqul aadanaha ah.
Kulanka waxaa soo xiray Wasiirka Cusub ee Warfaafinta, Isgaarsiinta, Hidaha iyo dhaqanka Dawlada Eng, Maxamuud Caydiid Dirir wuxuuna goobta ka balan qaaday in Wasaaradiisu ay taabagalinayso horumarinta Warbaahinta Puntland, In ay xoojinayso isku dawlada iyo Warbaahinta, in ay ku dadaalayso tayaynta Warbaahinta Puntland iyo sidii ay u dhaqan galin lahaayeen baaqa wada jirka ah ee shirkan ka soo baxay, warbaahintana wuxuu ugu baqaay in ay muujiyaan wadaniyad, Wadashaqayn iyo in ay hor mariyaan u adeegida bulshada iyo ka shaqaynta danta Caamka ah.
Daljir Garowe Silfar.
Ogaysiis ku socda akhristayaasha mareegta Radiodaljir.com. (Dhagayso fariin cod ah)